Archive du 20180127
Tiko, Magro … Nodorana nefa tsy levona
Feno sivy taona katroka omaly ny Alatsinainy Mainty nitranga ny 26 janoary 2009, nisian’ny fandrobana, fandoroana ary nahapotika orinasa marobe teto Madagasikara nandritra ny fanonganam-panjakàna notarihin’i Andry Rajoelina ny taona 2009.
Jean Ravelonarivo Miomana ho kandida filoham-pirenena
Manomana mafy ny firotsahan-kofidiana ho filoham-pirenena ny praiminisitra teo aloha Jean Ravelonarivo raha ny resaka mivoaka.
Antokon’ny fitondrana tany Ambositra Nitafy henatra ry Rivo Rakotovao
Notontosaina omaly zoma 26 janoary tao Ambositra ny fihaonambem-paritry ny Antoko HVM ho an’ny faritra Amoron’i Mania. Teo ambany fiahian’ny filoha nasionalin’ny antoko, Rivo Rakotovao ny fihaonana natao tao amin’ny Fark Md Joseph Ambositra, ary nandeha tsy nisy sakantsakana satria ny antokon’ny fitondrana moa no manao hetsika, ka dia afaka nanao izay tiany natao.
Vokatry ny hambom-po politika Potehina ny renivohitra sy ny vahoakany
Tsy takona afenina ny tombo sy hala eo amin’ny fanampiana sy ny tosika ara-pampandrosoana atao amin’ny kaominina an-drenivohitra eto Madagasikara.
Be resaka tsss…
Miarahaba lesy Jean a, izaho nama tena resy lahatra fa tompon’ny kôzikôzy bobaka ianao a ! tena samy manaiky izany ny rehetra e.Fa izao ry jean a, mba aiza ho aizakay izao ilayhoe delestazy foana ao anatin’ny 3 volana nolazainao 4 taona lasa izay ?
Fitsarana Malagasy Mbola azo hatokisana ve ?
Nahabe resaka tamin’ity volana ity ny raharahan’ilay teratany Frantsay Houcine Arfa, tokony higadra 3 taona eto Madagasikara nefa tafatsoaka.
Tale iray saika hotendrena mpikamban’ny HCC Nopotehin’i Houcine Arfa ny lalany
Mivoaka ny vaovao amin’izao fa saika hotendrena ho mpikambana eo anivon’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC ny tale kabinetran’ny minisiteran’ny fitsarana Andry Rabarisoa.
Karaman’ny fonksionera Tsy niakatra, nisy nihena aza
Nandiso fanantenana ny mpiasam-panjakana ny tsy fiakaran’ny karama tamin’ity taona 2018 ity. Efa tapitra nandray karama daholo izy ireo saingy tsy nisy fisondrotana, hoy ireo fonksionera maromaro nanontaniana.
Lafo ny hen’omby Tsy mandeha intsony ny tsena
Tafakatra 12.000 Ar ankehitriny ny iray kilao amin’ny hen’omby eny an-tsena raha 13.000 Ar ny nofon-kena sy ny toton-kena.
Fahasarotan’ny fikarakarana taratasim-panjakana Mampirongatra ny kolikoly
Tokony hihena ny fotoana lany amin`ny fikarakaran`ny antotan-taratasy any amin`ny sampandraharaham-panjakana.
Faneva Ima 1,5 miliara ariary no nakan’i Le Havre Athletic Club azy
Mamiratra sy misongadina, ary tsy very lalana ny Malagasy mpilalao baolina kitra mila ravinahitra any ivelany ankehitriny.
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Jean Yves Ranarivelo na i Joda “Tsy tokony hieboebo izany ny olona tena tompon-daka”
Ilay mpanamory fiarakodia fanta-daza amin’ny fanaovana rallye eto amintsika ary anisan’izay nankafizin’ny mpijery an’ity taranja ity tanteraka ka nahafeno mpijery tokoa rehefa miaka-tsehatra no vahinintsika ato anatin’ity pejin’ny Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy anio.
Famaranana rugby Gold Top 8 Hangotraka ny fifandonan’ny COSFA sy ny FTM
Ho fararanon’ny lalao baolina lavalava indray etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina rahampitso alahady 28 janoary 2018.
CHAN Maroc 2018 Raikitra ireo lalao 1/4-dalana
Rehefa niato kely roa andro, ny alakamisy 25 sy ny zoma 26 janoary 2018, ny fifaninanana baolina kitra « Chan Maroc 2018 » dia miditra eo amin’ireo lalao 1/4-dalana rahampitso sabotsy 27 sy ny alahady 28 janoary 2018.
Atomotra ny fotoana !
Andro sisa isaina, dia hifanarana ny fotoana hahafahan’ny isam-batan’olona manara-maso sy manamarina ny anarany na ao anaty lisi-pifidianana na tsia. Ny alarobia izao no ho tapitra tanteraka ny fe-potoana nomena,
HJRA Ampefiloha Nahazo toeram-pandidiana manara-penitra ho an’ny zaza
Nahazo efitrano fandidiana zaza ny eo anivon’ny hopitaly oniversitera Joseph Ravoahangy Andrianavalona etsy Ampefiloha.
Lalàn’ny fananan-tany “Tokony hampifanarahana amin’ny filan’ny Malagasy.”
Arakaraky ny maha be ny atrikasa sy fivoriana fampahafantarana ny vahoaka ny lalana mifehy ny fananantany eto amintsika no toa vao mainka mampirongatra ny aditany sy ny olana mikasika ny fanantany, indrindra, raha mitodika tamin’iny taona 2017 iny no ho mankaty. Araka ny fanazavan’ny mpandrindra nasionalin’ny sehatra ifotony mikasika ny fananantany (SIF),
« Sommet de Versailles » tany Frantsa Soa fianatra hisintonana mpampiasa vola
Mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny amin’ny fampirisihina ireo vahiny hampiasa vola any aminy. Rehefa avy nitsidika tany Onnaing, foiben`ny orinasa Toyota any Frantsa izy dia nanomboka nandray tsikelikely ireo mpanam-bola maneran-tany amin`ny sehatra maro isan-karazany tao amin`ny Chateau de Versailles.
Hetsiky ny SECES nasionaly Tsy nanotrona ny sampana Antananarivo
Nanambara tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny oniversiten’Antananarivo eny Ankatso omaly ny avy eo anivon’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka manerana ny nosy na ny Seces nasionaly fa efa